Daawo:- Ninkii Weeraray Guriga Madaxweyne K/xigeenka Kenya William Ruto Oo Noqday Nin Somaliyeed (Daawo Maqal Muqal)
Fikradaha Muqaalo taariikh Wararka Waraysi Youtube August 1, 2017
Nairobi(Allssc): Booliiska dalka Kenya oo baaritaano ku sameeyay weerar labo maalin kahor lagu qaaday guriga Madaxweyne ku xigeenka Kenya uu ku lahaa deegaanka Uasin Gishu ee magaalada Eldoret, waxaana booliiska aqoonsadeed shaqsiyada ninkii weerarkaasi ka dambeeyay.
War kasoo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in Weerarka lagu qaaday guriga Madaxweyne kuxigeenka dalka Kenya uu ka dambeeyay hal oo kaliya, ninkan oo kasoo jeeda Deegaanka Dandu ee Bariga magaalada Mandhera ayaa magaciisa lagu sheegay Mohammed Ibrahim Muhammad .
Taliyaha ciidamada dambi baarista Kenya Ndegwa Muhoro ayaa sheegay in Weerarka lagu qaaday guriga Madaxweyne kuxigeenka uu fuliyay hal nin oo kaliya , waxa uuna tilmaamay in ninka Weerarka fuliyay uu ahaa nin ganacsade ah oo wax ku iibin jiray magaalada Eldoret.
Booliiska ayaa wali gacanta ku haya meydka ninkan Soomaaliga ah, waxa ayna booliiska sheegeen in ay baaritaano dheeraad ah ku sameenayaan meydka ninkan si ay u ogaadaan in horey dambiyo kale u galay iyo in kale.
Ninka weerarka geestay ayaa la sheegay in xariir uu la lahaa waxna ka iibin jiray ilaalada guriga Madaxweyne kuxigeenka dalka Kenya, waxaana ninkan weerarka geestay uu dilay nin ilaalo u ahaa guriga kahor inta aan isna lagu dhax dilin guriga uu weeraray.